Mogadishu Journal » 2018 » July » 13
Mjournal :-Xiriirka kubbada cagta ee adduunka FIFA ayaa u magacawday garsoore Nestor Pitana oo u dhashay dalka Argentina in uu dhexdhexaadiyo ciyaarta kama dambeysta ama finalka ah ee tartanka ciyaaraha adduunka ee France iyo Croatia. Garsoore Nestor oo ah 43 jir ayaa ahaa...
Mjournal :-Dowladda Norway ayaa maanta ku dhawaaqday in ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliya, ayada oo ku biiraysa dalalka Yurub ee horay u aqoonsaday sida Faransiiska, Talyaaniga iyo kuwo kale. Munaasbad lagu qabtay magaallada Nairobi oo ay ka qeyb galeen Wasiirka Arrimaha...
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa bogaadiyay is-fahamka ay gaareen Mas’uuliyiinta maamulka Galmudug oo maalmahan u joogay magaalada Muqdisho xal u helida khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jiray. War saxaafadeed la soo baxay Madaxtooyada Villa...
Mjournal :-Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya duleedka magaalada Muqdisho, rag hubeysan ayaa saakay duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ku dileen nin Oday ahaa oo ka mid ahaa Culimada sida weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho. Dilkan oo si gaar ah uga dhacay inta u...
Kenya on Thursday hosted an estimated 200 delegates from 68 countries amid renewed pledge to support innovative strategies aimed at eradicating the menace of piracy along the Somalia coastline. The 21st Plenary Session of the Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia...
Mjournal :-Wafdigan oo uu horkacayay taliyaha cusub ee saldhigga qeybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Kismaayo Sarreeye Guuto Cali Bogmadoow ayaa dib looga celiyay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Sidoo kale wafdiga waxaa qeyb ka...
Mjournal :-Ku simaha Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Mudane C/xakiin Xasan Ibraahim Ashkir oo waraysi siiyay warbaahinta dowladda, isaga oo ku sugan wadanka Sacuudiga ayaa wuxuu ka warbixiyay kulamo uu halkaasi kula qaatay masuuliyiin ka...
Mjournal :-Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo bandhigtay nin ka tirsanaa ururka Al-shabaab, kaasi oo garawsaday inuu ku biiro maamulka Jubbaland. Ninka Shabaab ka tirsan ee isa soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa Aadan Huudow Cabdi, wuxuuna xilliga Jubbaland ku soo...